Dabagalka, New York, NY (2021)
Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from Dabagalka, Media/News Company, New York, NY.
Dabagalka's cover photo
Barnaamijkeena dabagalka waxaan idinkula wadaageenaa xaqiiqooyin ku saabsan Fashilka ku yimid SWEDISH SOMALI HOSPITAL oo ku dhaw in laxero .
Waxaa sabab u ah in uu fashilmo arimahaan aan idiin soo gudbinayno sida aan ku helnay warar hoose.
1) Aqoon la,aan haysato dadka meesha leh oo sheeganayaan in ay dhakhaatiir yihiin waa sida ay iyagu sheeganayaan balse aysan wali cadeen in ay yihiin dad cilmigaas leh taas oo hormuudka kowaad ka ah fashilka isbitaalkan kaa oo ku dhaw in dhawaan al baabada loo laabo.
2) Beenta bulshada loo sheego sida in ay hayaan dhamaan wixii isbitaal looga baahnaa
Taa badalkeeda waxa ay sida saxda ah u hayaan labo qeebood oo kala ah sida, Cudurada Haweenka, Qaliinka Guud waxaana soo sadaxeeyo cudurada guud oo marba dhakhtar qaabilo.
3) Postiyada ay soo dhigaan Facebook oo anan ku salaysneen runta taa oo lumisay bulsho badan oo ku xirneed isbitaalkaas .
4) Qaybta kumbuutarka oo ay saarto gabadh aanan aqoon u lahayn taas oo dad badan ay ka sheegtay Cuduro aysan qabin sida buro, dhagax, kanser, kadibna dib u aaday isbitaalo kale .
5) Isbuucyadii lasoo dhaafay waxaa meesha ka baxay shaqaalo meeshaas muhiim u ahaa kuwaas oo uga tagay arimo maamul xumo darteed go,aana ku qaatay in ay ka tagaan horey ayay Soomaali waxay ugu maahmaahday (ninaan talin jirin haduu taliyo ninaan tagi jirin ayaa tago) .
6) Waxaan wada ognahay in hadii xarun ganacsi laga furayo guud ahaan gayiga soomaaliyeed ay lagama maarmaan ay tahay lay qorshaha lagu daro goob ay ku cibaadaystaan shaqaalaha iyo dadka usoo aada baahiyaha gaarka ah
7) Lacagta Qaliimada & service yada qaar oo aanan fadhiyin sida ay inoo sheegeen dad bukaano ah lagu khalday meeshaas in ay lacag la,aan tahay midaan waa mid aan waa faqsanayn shareecada Islaamka in dadka been abuur loo maleego.
Hadaba waxaan dowladeena Soomaaliyeed maxaa la gudboon in ay ku xaliso arimahan loogaysanayo
Umadeena soomaaliyeed taas oo maalin waliba wax aan aqliga galeenin ay ku sameeyaan dad anan aqoon iyo iyo dadnimo lahayn.
Hadaba dowlada soomaaliyeed dib u baaris haku samayso dadka xarumaha caafimaadka furanaya kuwaa oo intooda badni si khaldan u adeegsada daaweenta umadeena.
Walina aanan la aqoonin heerka aqoontoodu ay gaarsiisan tahay iyo Shahaadada ay hastaan.
Hadaba cidii danaynaysa in aysan tan oo kale ku dhicin faamilkooda hala sii wadaagto asxaabtooda iyo faamilkooda si ay oga digtoonaadaan dhagarka dadkan aan aqoonta lahayn.
Madaxda dalkana dib ha u fiirshaan waxa ka socdo isbitaalkan iyo kuwa kale ee magaalada Mogadishu ku yaalaan.
Asc waa mar kale iyo barnaamijkeena Dabagalka
Waxaan Caawa Qeebtiisaa 3 xaad kusoo gudbinaynaa isbitaalka Ex digfeer .
1. Ma ogtahay in isbitaalka Digfeer Qaybtiisa Emergencyga Maalin waliba ay ku dhintaan in kabadan 5 Qofood Sababa Daryeel la,aaneed darteed.
2. Mase ogtahay in Shaqaalaha ay qaataan intooda badani aysan lahayn Akhlaaqad ku filan.
3. Ma ogtahay in sidoo kale ay ICU ga isbitaalka dadka gala ay intooda badani aysan la soo bixin ayagoo caafimaad qaba Sababtuna tahay daryeel la,aan ka jirta taas oo keentay in Bulshada Soomaaliyeed ay intooda badani kala baqaan dadkooda in ay Geestaan.
4. Mase Ogtahay in ay Kalkaaliya yaasha isbitaalka %60 Ay isticmaalaan Social Media Marka ay jogaan shaqada Oona sababta in Dadka ku dhintaan.
5. Mase ogtahay Dhakhaatirta Joogta inta ugu badani ay dalka u yimaadaan Baraatiko si ay u sameeyay.
6. Mase ogtahay dhaqaatirta isbitaalkaas intooda badani ay dhanka maskaxiyan ahaan u fiicnayn si ay bukaanka u qan ciyaan oo mararka qaar dhacaan arimo Gacan ka hadal dhax mara Dhaqaatirta iyo Bukaanka.
Hadaba mudane/Marwo wadankeena waxaa ku soo badanayo dhibaatooyinka & Gabood falka lagu hayo bulshadeena u baahan Caafimaadka ay helaan Dadka kale ee ku nool dunida daafaheeda.
Hadaba Maxaa nala gudboon ?
Barnaamijkeena Dabagalka Qaybtiisa labaad waxaan Caawa ku soo ban dhigaynaa xog ku saabsan Isbitaalka Xaawa Abdi.
1.Ma ogtahay mudane/Marwo in isbitaalka Xaawa Abdi Qaybytiisa MRI ga Jogaan Rag aanan Aqoon u lahayn kuwaas oo markoodii hore ku joogeen magaalada Xirfadaha kale ee Caafimaadka.
2. Mase ogtahay in isbitaalka Xaawa Abdi
Bukaanada Daawadooda aanan la siinin waraaqdooda hadii ay doonan in ay banaanka ka gataan.
3.Mase Ogtahay in daawada Qofka loo diyaariyo loona soo qaso marka uu iibsado si loo siiyo si uusan u arkin oo uusan magaalada ooga gadan balse dadka ay u sheegaan in ay daawadooda ilaashadaan.
4. Mase ogtahay in bukaanka uusan arkeenin daawa magaceeda iyo Nuuca ay tahay.
.5 Ma ogtahay in markii aad rabto in aad la kulanto Isla dr Xaawa abdi aad bixinayso lacago badan balse aysan iyada sidii aad rabtay aysan kuu qaabilaynin oo ay kuu gudbinayso Isla gabadheeda Dr Amina.
6. Mase ogtahay in Daawada isbitaalka Xaawa Abdi Daawadiisa Laga iibiyo isla Magaalada Mogadishu kuwaas oo laga kala Keeno Dalalka Gorgia, Bangladesh, Turkey, India, kuwaas oo suuqayada daawada yaalaan.
Hadaba Dowladeena maxaa la gudboon si loo saxo Dhibaatada ka jirta Xarumaha lagu dabiibo Dadka xanuunsan si loo helo Xaruma Caafimaad oo tayeeysan?
Barnaamijkeena Dabagalka Qabtiisa Kowaad waxaan ku soo bandhigaynaa Xaqiiqooyin ku Saabsan Isbitaalka Somali Swedish.
1. Ma ogtahay in isbitaalka Somali Swedish shaqaalihiisa la baaro marka ay soo galayaan iyo marka ay baxayaan sababo aaminaad daro awgeed oo ay Madaxda meesha qabaan darted.
2. Ma ogtahay in isbitaalka shaqaalihiisa aysan haysan suruuc lagu maamulo oo waafaqsan kan wasaarada Caafimaadka ee dowlada federalka ah & Kan caalamiga ah ee haayadaha Caafimaadka.
3. Ma ogtahay shaqaalaha in markii Ladoona shaqada looga ceeriyo si sharci daro ah oo xitaa anan la siinin xaqiisii uu shaqaystay oo uu lahaa.
4. Ma ogtahay in shaqaalaha aysan lahayn fasax xitaa Maalmaha ciida oo ay shaqeeyaan Qasabna ku tahay in ay shaqeeyaan xitaa hadii anan la joogin.
5. Ma ogtahay in wakhtiga salaadaha lagu amro in ay shaqeeyaan iyadoo lagu handadayo in shaqada laga dirayo Laguna salaynayo in ay shaqada dayaceen.
6. Ma ogtahay in xilka maamulka hayo Wiil dhalinyaro ah markiisii 2 baad balse uma madax banaano xilkiisa oo isagii ayaaba shaqaalaha kale kaba hooseeyo marka loo eego dhanka go,aanada iyo taladaba.
7. Ma ogtahay in bishaan shaqada laga diray 6 Qafood arimo shaqsiyadeed darteed oo ay qancinyaaween Dhaqtarad magaceeda la dhaho Hodan waxaana loo adeegsadaa in ay shaqaalaha dirto maamo habaryarteed ah.
8. Ma ogtahay In isbitaalka Loo dhiibay in kabadan 7 Maamule sababtuna ahayd aaminaadaro jirta awgeed .
9. Ma ogtahay in shaqaalaha marka ay bisha dhamaato laga jarto Lacagtii heshiiska ee Mushaarka ahayd qeeb iyadoo lagu dhahayo waxna Lama shaqeenin xitaa hadii la shaqeeyo.
10. Ma ogtahay in dhaqaatiirtii ka tagtay ay ooga tageen in aysan u madax banaaneen shaqadooda.
Fadlan la wadaag Asxaabtaada siina share garee. MAHADSANIIIN
Ku xirnow page Keenan oo aan ugu tala galnay in an ku soo bandhigno Xogaha ka jira Isbitaalada Magaalada Mogadishu
Be the first to know and let us send you an email when Dabagalka posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.